Wararka Roobka Dayrta iyo Degaano Baddan oo Puntland Ah (dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2017 8:46 b 0
Roobabkii dayrta ayaa ka curtay deegaanno badan oo gobollada Puntland ah iyo meelo ka baxsanba,meelaha raxmadaasi dayrta ku hoortay saacaadihii ugu dambeeyay ee ka tirsan Puntland waxaa kamid ah deegaanno badan oo ka kala tirsan gobollada Nugaal ,Mudug ,Sanaag ,Hayland ,iyo Karkaar .
Gobollada Nugaal iyo Mudug oo kamid ah meelaha Roobabka fiicanii ka da’een saacadihii ugu dambeeyey,ayaa la tilmaamayaa roobabka helay inay isugu jiraan doogsin baaragaha buuxiyay ,toggagii buuxsameen iyo xareed dhacmo koob kooban ,waxaana kamid ah meelahaas Roobabku heleen ee gobollada Nugaal iyo mudug ,deegaannada dhiganle ,Dhanaane,Bur-saalax, Balli-busle, Xolobyo iyo meelo kale oo isla labadaas gobol ah .
Gobollada Sanaag iyo Karkaar ayaa iyana meelaha qaar Roobab wanaagsani ka horeen ,halka Sool iyo Hayland dhowr meelood roobab ka da’een ,waxaana meelahaas kamid ah deegaanada hoosyimaada degmada Laascaanood .
Dhinaca kale,inta badan gobollada Puntland wararkii ugu dambeeyay waxaa ay sheegayaan inuu jiro cusboonaan xagga cirka ah iyadooo la dareemayo jawi Roobaad ,iyadoo daruuro biyaysan ay cirka saameeleen ,ama buuxiyeen ,meelo badana laga arkayo daruuro curtay oo hooraya .
Saciid Cabdinuur Maxamuud oo kamid ah odoyaal dhaqameedka degmada Bursaalax ee gobolka ayaa Idaacadda Daljir u xaqiijiyay degmada iyo deegaannada hoosyimaada uu ka da’een robab caaqibo leh .
Axmed Muuse Maxamed Guddoomiyaha Iskaashatada Beeralayda gobolka Hayland ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay in deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Hayland uu ka da’een roobab isugu jira doogsi iyo biyo dhig .